Gịnị bụ ihe Ad Server? Olee otu Mgbasa Ozi Si Arụ Ọrụ? | Martech Zone
Gịnị bụ ihe Ad Server? Olee otu Mgbasa Ozi Si Arụ Ọrụ?
Sunday, Jenụwarị 7, 2018 Saturday, January 6, 2018 Douglas Karr
Ọ nwere ike ịdị ka ezigbo ajụjụ elementrị, “Kedụ ka esi ozi mgbasa ozi na weebụsaịtị?”Usoro ahụ dị oke mgbagwoju anya ma na - eme n'oge dị oke egwu. Enwere ndị nkwusa n'ụwa niile na-enye ndị dị mkpa, ndị agbadoro ozi mgbasa ozi na-anwa iru. Mgbe ahụ, a na-enwekwa mgbanwo mgbasa ozi n ’ụwa niile, agbanyeghị, ebe ndị na-akpọsa ngwa ahịa nwere ike ịchọta, gbaa akwụkwọ ma debe mgbasa ozi.
Gịnị bụ ihe Ad Server
Sava mgbasa ozi bụ sistemụ na-eme ka arịrịọ, ịrịọ, na ije ozi nke mgbasa ozi ndị ahụ yana akụkọ banyere arụmọrụ nke mkpọsa ndị ahụ emere. A bụ ihe nnyocha video si Doubleclick maka nkwusa (DFP), Google Ad Ad:
Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi:
Onye ọrụ bịarutere na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa gị.
Mgbasa ozi na-arịọ si Ad Server na ndepụta njirisi na ihe mgbasa ozi ndị kwesịrị ekwesị. Nchịkọta nwere ike ịgụnye nha nke oghere ad, ụbọchị na oge nke ụbọchị, na ọnọdụ ala.
Ad Server ahọrọ nke mgbasa ozi a ga-eje ozi dabere na njirisi.
A na-eweghachi mgbasa ozi ahọpụtara na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa maka onye ọrụ iji hụ.
Ad Server na-egwu egwu oge ọ bụla ad.
Ka ihe niile wee rụọ ọrụ ọfụma, ọ chọrọ ka onye mbipụta kọwaa ngwongwo ha na Ad Server, mepee ya maka ọrịre, kwado mkpọsa, tụọ ma bulie arụmọrụ iji bulie ego ha. Google etinyela ihe omuma a ọnụ, Gịnị bụ DFP? (DoubleClick maka ndị mbipụta)
Tags: sava admgbasa oziOgbookpukpu abụọ maka ndị nkwusasava ad googlegoogle +Kedu ihe nkesa mgbasa ozikedu ihe dfpihe bụ okpukpu abụọ maka ndị nkwusa
Outook Customer Manager: A Free Kpọtụrụ Manager App maka Office 365 Business Premium